प्रकृति जोगाउन उदाहरणीय काम गर्दै भूटान, इन्धनका लागि जलविद्युतमा जोड
scheduleसोमवार माघ १३ गते, २०७६
अभया श्रीवास्तव/पुनखा, भूटान, २४ असोज । विश्वमै सबैभन्दा न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रको सूचीमा भूटानको नाम जोसुकैले उदाहरणका रुपमा लिइरहन्छन्, तर व्यापक आर्थिक विस्तारको साटो यी हरित पदचिन्हमा हिँड्ने हिमाली अधिराज्य भूटानको चाहनाले ठूलै चुनौती खडा गरेको छ ।
गत अक्टोबर १८ मा तेस्रो संसदीय चुनाव सम्पन्न गरेको यो हिमाली मुलुकले आफूले उत्सर्जन गर्ने कार्बन–डाइअक्साइडभन्दा तीन गुणा बढी सोस्दछ । कूल भूभागको ७२ प्रतिशतभन्दा बढी वनजंगलकै कारण यो सम्भव भएको हो ।
“लास्ट साङ्ग्री–ला” नामबाट विश्वभर चिनिएको स्वीट्जरल्यान्ड जत्रै आकारको भूटानले वातावरणलाई निर्मल र स्वच्छ राख्न निकै ध्यान दिएको छ, र कहिलेकाहिँ यसैका निम्ति नाफा पनि त्यागेको छ ।
करिब आठ लाख जनसंख्या रहेको भूटानले राम्रो सिजनमा प्रति पर्यटक दैनिक दुईसय ५० डलर लिन्छ, तर त्यसका लागि पर्यटकको संख्या पनि तोकिएको छ । कतिपय ठाउँमा पर्यटकको घुँइचोले सुन्दरता उजाडिएकोमा भूटान चिन्तित छ ।
यही मे महिनामा भारतको सहयोगमा क्षेत्रीय सडक सञ्जाल परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रस्तावलाई भूटानले अस्वीकार गरेको थियो । भूटानले अन्य मुलुकका सवारी साधनले हावालाई प्रदूषित बनाउने कारण देखाउँदै उक्त परियोजनामा सहमति जनाएको थिएन ।
भूटानको संविधानमा भूटानको कम्तीमा ६० प्रतिशत भूभाग वनजंगलले ढाकिएको हुनेछ भन्ने लेखिएको छ । वनजंगलकै लागि खेतीपाती र निकै लाभदायक काठ उद्योगलाई समेत भूटानले बेवास्ता गरेको छ ।
“हाम्रो वन्यसम्पत्तिको दोहनका लागि ठूलै प्रयास भएका हुन् तर हामीले भविष्य हेरेका छौं,” भूटानको राष्ट्रिय वातावरण आयोगका दासो पाल्जोर दोर्जीले बताए ।
भूटानको ११औं पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत सन् २०२० सम्ममा वनमा आधारित इन्धनलाई व्यापक रुपमा घटाउने उल्लेख छ । यहाँ अहिले १०० वटा विद्युतीय कार सडकमा गुडिरहेका छन् तर यो संख्या बढाउने नीति भूटानको छ । भूटानमा विद्युतीय कारका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । सन् २०१६ मा भूटानमा हावाबाट चल्ने पहिलो विद्युतीय टर्बाइन जडान गरिएको थियो ।
ट्राफिक बत्ती समेत नराखिएको एसियाकै एकमात्र राजधानी थिम्पुमा हरियाली प्रतिको प्रतिबद्धता सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ । थिम्पुका सडकमा ठुल्ठूला मेसिन प्रयोग गरेर सफा गरिरहेकोजस्तो दृश्य सायद दक्षिण एसियामै सायद बिरलै देख्न पाइन्छ । ट्रकले एकाबिहानै अर्गानिक फोहोरमैला घरघरबाट सङ्कलन गरिरहेको हुन्छ ।
थिम्पुबाट दुई घण्टामा पुग्न सकिने पुनाखा जिल्लामा निर्माणाधीन ठूलो जलविद्युत परियोजनामा बुल्डोजर लगायतका ठुल्ठूला मेसिनरीले अहोरात्र काम गरिरहेको देख्न पाइन्छ । कार्बन तटस्थता (न्यूट्रल) अपनाउने योजना बमोजिम भूटानमा यस्तै १० वटा जलविद्युत परियोजना निर्माणका क्रममा छन् ।
यी सबै चालू एवं भावी जलविद्युत परियोजनामा भूटानको सबैभन्दा ठूलो साझेदार मुलुक भारतको लगानी रहेको छ । जलविद्युत पनि भूटानको सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोत हो । एसियाली विकास बैंकका अनुसार सन् २०१६ मा भूटानको कूल निर्यात आम्दानीको करिब ३२.४ प्रतिशत हिस्सा जलविद्युतको रहेको थियो ।
भूटानको सम्पूर्ण विद्युत भारत निकासी हुन्छ तर यो बंगलादेशलाई पनि बिक्री गर्ने योजना छ । तर जलविद्युतका लागि बनाइएका बाँधले जैविक विविधतामा असर पार्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ किनभने भूटानले नदी–सतही मोडेल (रन–अफ–रिभर) को साटो अग्ला बाँध (रिजभ्र्वाएर) बनाउन थालेको छ ।
हरित विकास पथको अवलम्बन गरिरहन भूटानलाई बाहिरी विश्वको साथ सहयोग जरुरी हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्ष सन् २०१५ को पेरिस जलवायू सम्झौताबाट अलग्गिने घोषणा गरेलगत्तै भूटानजस्ता मुलुकले हरितगृह जोगाएबापतको रकम प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ ।
उक्त सम्झौता बमोजिम, धनी राष्ट्रले विकासशील मुलुकहरुलाई हरितगृह जोगाए बापत सहयोग गर्न वार्षिक १०० अर्ब अमेरिकी डलरको कोष निर्माण गर्ने सहमति गरेका थिए ।
भूटानले जलवायू परिवर्तनको असरलाई राम्रोसँग बुझेको छ, किनभने यहाँ पनि केही वर्षदेखि हिमनदी पग्लने, खेतीबालीको ढाँचामा परिवर्तन हुने तथा लामखुट्टे फैलिएर रोग लाग्ने हुन थालिसकेको छ ।
भूटानको औसत तापक्रम ३० डिग्री सेल्सियस हुन थालेको छ । स्थानीयबासीमाथि गर्मी र आद्रताले सताउन थालेको छ । “हिउँ पर्ने ढाँचामा समेत परिवर्तन आइसकेको छ । पहिले पहिले यहाँ केही दिन हिउँ पथ्र्यो, आजभोलि मुश्किलले एक दिन पर्न थालेको छ,” भूटानका प्रमुख वातावरण अधिकृत तेन्जिङ वाङ्मोले बताए ।
वाङ्मोले तातो हावापानीकै कारण बुम्थाङजस्ता ठाउँमा धानखेती हुन थालेको छ जहाँ पहिले कहिल्यै धान हुँदैनथ्यो । “जलवायू परिवर्तन हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । हामीले केही गरेका पनि छैनौं तर हामीले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ,” उनले भने ।
‘यसबाहेक, माथिल्ला हिमाली भेगमा समेत बाढी रोकथाम गर्न नयाँ ढल निर्माणका लागि कामदारहरु खटाउनु परेको छ,’ वाङ्मोले भने । “यी कामका लागि धेरै रकम र जनशक्ति आवश्यक पर्न थालेको छ । तर त्यस्तो रकमको जोहो गर्न र क्षमता–निर्माण गर्न भूटानजस्ता देशले कसरी सक्छन् ?”
अगस्टमा भूटानको भ्रमण गरेको हरित जलवायू कोष (जीसीएफ) को प्रतिनिधिमण्डलले न्यून कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायू–पुनरुद्धारमा भूटानले गरेको प्रगतिलाई ध्यानमा राखी सहयोग गर्ने बताएको छ ।
“मेरो विचारमा कार्बन उत्सर्जन रोक्न तथा प्रकृतिलाई जतिसक्दो मौलिक बनाइराख्न भूटानको योगदान अतुलनीय छ,” दोर्जीले भने, “हाम्रो अभियान समर्थनको लायक छ । हामीलाई बढी होइन, कम्तीमा समान रुपबाट पुरस्कृत गर्नु पर्दछ ।” रासस/एएफपी
फिचर पोस्ट, राजनीति
सभामुखमा सापकोटा निर्वाचित, यस्तो छ उनको राजनीतिक यात्रा
११ वर्षको भयो इसेवा, यस्तो छ संघर्ष र सफलताको आरोह-अवरोह
फिचर पोस्ट, विश्व, साझापोस्ट सिफारिस
महाथिरको मौलिक मोडेलः यसरी भयो ‘मलाय’बाट ‘मलेसिया’को उदय
एक चक्की औषधी जसले अमेरिकालाई आर्थिक क्रान्तितर्फ डोहोर्‍यायो
राज्यको विश्वसनीयता योभन्दा तल गिर्ने कुनै ठाउँ छ ?
फिचर पोस्ट, मुख्य समाचार, राजनीति
कांग्रेसको विवाद मिलाउँदैछन् कि आफ्नो भाग खोज्दैछन् सिटौला ?
फिचर पोस्ट, राजनीति, साझापोस्ट सिफारिस
सम्झनामा ‘ध्यान सर’
फिचर पोस्ट, साझापोस्ट सिफारिस
के हो ओलीसँग जोडेर चर्चा भइरहेको ‘हुन सेन मोडेल’?
सम्भोगको चाहना नै नहुने युवती कस्तो जिन्दगी चाहन्छन् ?
मधेश जनविद्रोहका १३ वर्षः कस्तो छ मधेशको पछिल्लो मुड ?
आइनस्टाइनले छोरीलाई लेखेको गोप्यपत्र जसले संसारलाई झस्काउँछ
पूर्वमाओवादीको पोल्टामा सभामुख, प्रचण्डले एउटा मोर्चा जितेका हुन् ?
‘अग्नि सर’को राजनीतिक यात्राः हेडसरदेखि सभामुखसम्म !
दिल्ली निर्वाचनः ५ वर्षभित्र १० काम गर्ने केजरीवालको प्रतिवद्धता (सूचिसहित)
भीम रावलको चर्का कुराः कुन्ठा कि राष्ट्रवाद ?
ओलीतिरै फर्किंदै उनका उखानका तीर
अप्ठेरोमा वामदेवको ‘प्रधानमन्त्री सपना’
भैंसीपालनले ल्याएको खुसी
के हो प्रचण्डको पछिल्लो रणनीति ?
हामी कुन उमेरमा बढी दुःखी र निराश हुन्छौं ?
धर्मबारे शाहरुख भन्छन्- म मुसलमान, मेरी पत्नी हिन्दू अनि छोराछोरी…
एजेन्सी, १२ माघ । बलिउड अभिनेता शाहरुख खान हालै डान्स रियालिटी शो ‘डान्स प्लस-५’ सहभागी भएका थिए । सो अवसरमा उनले आफ्ना...
द्वन्द्वका कुरा नकोट्याऔं, द्वन्द्वको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छः रावल
काठमाडौं, १२ माघ । सत्तारुढ नेकपाका नेता भीम रावलले विगतका द्वन्द्वका कुराहरु कोट्याउँदा मुलुक अर्कै दिशातिर जाने धारणा...
ह्यारी, मेघन र मार्क्स
कार्ल मार्क्सले पूर्वानुमान गरेका थिए– पुँजीवादले सामन्तवादका सबै अवशेषहरुलाई नष्ट गर्दछ । कम्युनिष्ट घोषणा पत्रकै भाषामा...
अग्नि सभामुख भएपछि कसले के भने ?
काठमाडौँ, १२ माघ । सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेताहरुले नवनियुक्त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्लाई जनता र सांसद्को आवाज...
बेलायती राजकुमार चार्ल्सले इरानको भ्रमण गर्ने इच्छा व्यक्त गरे
एजेन्सी, १२ माघ । ब्रिटेनकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयका छोरा राजकुमार चा‌र्ल्सले आफू इरानको भ्रमण गर्न इच्छुक रहेको बताएका...
जिदानको चौतर्फी तारिफ
काठमाडौँ, १३ माघ । रियल मड्रिड पछिल्लो समय उच्च फर्ममा रहेको छ । रियलका प्रशिक्षक जिदानले नयाँ खेलाडीहरु किन्न खासै चासो पनि...
काठमाडौं, १३ माघ । गायिका आस्था राउतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । राउतविरुद्ध अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा यसअघि नै...
खतिवडाको प्रश्न- आस्थालाई पक्राउ गरेपछि नेताहरुलाई पनि पक्राउ गर्ने कि ?
काठमाडौं, १३ माघ । गायिका आस्था राउतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाको समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव डम्बर खतिवडाले विरोध...